Professional Hot Sell eshibhile Bonnell Spring Mattress For Africa abakhiqizi | Rayson
Professional Hot Sell eshibhile Bonnell Spring Mattress For Africa abakhiqizi
Thola ulwazi! thola imininingwane mayelana ne-Hot Sell eshibhile iBonnell Spring Mattress Ye-Afrika, i-bonnell spring system mattress, i-damask bonnell mattress, iBonnell Spring Mattress
Rayson eRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo eyinhloko Professional Hot Sell eshibhile Bonnell Spring Mattress For Africa abakhiqizi
Umkhiqizo ubonakala ngokuguquguquka kwawo okuthuthukile. Iyakwazi ukuxhasa izinkomba eziningi ukuqedela izinhlobo ezahlukahlukene zemisebenzi eminingi.
Amakhasimende afuna ukwazi kabanzi ngomkhiqizo wethu omusha noma inkampani yethu, vele uxhumane nathi. Siyathembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende ephephile futhi ezwakala. Uma unanoma yimiphi imibuzo noma ufuna ukwazi kabanzi nge yethu, sishayele ngqo. Ngemuva kweminyaka yentuthuko, sisungule ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside namakhasimende ethu emhlabeni jikelele. Sicela uqiniseke ukuthi sinelungelo lokuthekelisa imikhiqizo yethu futhi ngeke kube khona umonakalo owenzekile empahleni ehanjisiwe. Samukela ngobuqotho uphenyo lwakho futhi ushayele.
Yiziphi izindlela zokukhokha ozamukelayo? I-LC ngokubona / nge-TT, i-30% yeDeposi ne-70% esele iphikisana namakhophi wemibhalo yokuthumela i-witinin izinsuku zokusebenza eziyi-7. 1.Beka ibhokisi phezulu endaweni eyisicaba egumbini lakho lokulala, donsela umatilasi ngokucophelela bese ubeka embhedeni wakho. 2. Sika ngokucophelela isikhwama sangaphandle ngesikele uqiniseke ukuthi awusiki ipulasitiki embi ngaphakathi noma kumatilasi, ungammangaleli ummese. 3. Khipha umatilasi ovaliwe ongenalutho ungene embhedeni wakho 4. Sika ngokucophelela isikhwama sepulasitiki eceleni kwewashi njengoba umatilasi eqala ukuwohloka ngokushesha, Susa isikhwama sepulasitiki. 5.Vumela amahora angama-24 ukuthi omatilasi bakho abasha banwebe ngokuphelele.Ngabe ngivakashela imboni yakho? Yebo, wamukelekile ukuvakashela imboni yethu nganoma yisiphi isikhathi, siseduze nesikhumulo sezindiza saseGuangzhou Baiyun, kungathatha ihora elilodwa ngemoto, futhi singahlela imoto ukukucosha.